Guddiga doorashada oo Kor Joogtada udiiday iney tagaan Xarunta doorashada ay ka dhaceyso! | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Guddiga doorashada oo Kor Joogtada udiiday iney tagaan Xarunta doorashada ay ka...
Guddiga doorashada oo Kor Joogtada udiiday iney tagaan Xarunta doorashada ay ka dhaceyso!
Gudoomiyaha Guddiga doorashada Afhayeenka Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Somaliya, ayaa ku dhawaaqay in Doorasada dhaceysa 30-ka Bishan aaney goob joog ka noqoneynin wax korjoogto Caalami ah.
Sababta ayuu ku sheegay in Kulan ay qaateen Guddiga doorashada la iskula meel dhigay in Doorashada ay ku koobnaato oo kaliya Xildhibaanada 275ta ah ee Golaha Shacabka, Waxa uu Gudoomiye Nuur Iidoow Beyle sheegay in Xarunta imanayaan 11 Qof oo loogu talagalay iney codadka utiriyaan Musharixiinta tartameysa.
Waxa uu dhinaca kale sheegay in Guddigooda ay gacantooda soo gashay $165,000 Kun, Gudoomiyha waxa lagu qabanayo lacagahaas, Waxa uu sheegay iney ku maareynayaan Shaqada hortaala Guddiga, ayna soo bandhigayaan Qaansheegto ay ku cadahay Meelaha ay ku baxday lacagtaasi dhamaanteed.
Gudoomiyaha Guddiga doorashada ee Golaha Shacabka Nuur Iidoow Beyle ayaa sidoo kale sheegay in Musharixiinta tartamaya ay kulan gaara la qaateen oo ku aadan iney ilalaiyaan Nidaamka doorashada, Musharixiinta ayuu sheegay ineysan qabin walaac ku aadan in doorashada si cadaalada udhici weyso.
Si Kastaba, Maalinimada Isniinta ah ayaa la filayaa iney Xarunta Golaha Shacabka ka dhacdo doorashada Afhayeenka Golaha Shacabka, Waxaana Musharixinta tartamaya ubadan Xubno isaga soo tagay Xilalkii ay ka hayeen Xukuumada Somaliya.